List Khabar – Page 401 – New List Khabar – Daily News Updates
October 11, 2021 समाचार 0
काठमाडौं,असोज २४–यो वर्षको दशैँको सुरुसँगै बीपी राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारी साधनले दशैँ मनाउन राजधानीबाट घर हिडेका यात्रुसँग मनपरी भाडा उठाएर ब्रम्हलुट मच्चाउन थालेका छन् ।राजधानी काठमाण्डौबाट सिन्धुली हुँदै पूर्वी नेपालको तराई हिँडेका यात्रुसँग यातायात व्यवसायीले मनपरी भाडा असुलेको उनीहरुको गुनासो छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार १६० किलोमिटर लामो …
पूर्वयुवराज पारश शाह अहिले फेरि चर्चामा अाएका छन् । अरु केहि नभएर मध्यरातमा हार्ले डेभिडसन बाईकमा एक युवतिसँग पारश देखिएपछि चर्चा चुलिएका हुन् । पारशको जस्तै कालो छालाको पाईन्ट र ज्याकेटमा देखिएकि ती युवति अरु कोहि नभएर डिजे रहेको प्रतिक्रियाहरु सामाजिक संजालमा आइरहेका छन् । काठमाडौँको ठमेलमा मास्क लगाएर पारशको …
काठमाडौँ — पा ‘सो ल’गा’एर देहत्याग गर्दा प्रयोग गरिएको डो री करोडौंमा बिक्री हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासमा परेर ल’लितपुरमा एक महिलाको ह’ ‘त्या भएको छ । यहि घ’ट’नाको आरोपमा महानगरीय अ’पराध महाशाखाले तीन जनालाई प’क्राउ गरेका छ । प्रहरीले आरोपमा मकवानपुर राक्सिराङ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का २३ वर्षीय सविन प्रजा, …
महिलाले किन ३० वर्ष भन्दापछी बच्चा जन्माउनु हुँदैन ? यस्तो छ कारण
एजेन्सी । पछिल्लो समय ढिला बच्चा जन्माउने एक प्रकारको ट्रेन्डननै बसेको छ । महिलाहरु प्राय अध्ययन र करियरको पछाडि लाग्दा ३० कटेपछि मात्रै बच्चाको योजना बनाउने गर्दछन् । सन्तान भन्दा करिअर र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रबृत्ति बढ्दो छ तर विज्ञहरुका अनुसार सन्तान जन्माउन ढिलाईको अर्थ आमा र शिशु दुबैको स्वास्थ्यमा …
October 11, 2021 जीवनशैली 0
गुल्मीकी सानी नानी बिनिता कुमालका पिता साउदी गएको १५ महिना मै दुर्घ टनामा परेर दुवै खुट्टा भाचिएर हस्पिटलमा मृ त्युसंग लडि रहेका छन् र आमा अर्कैसंग पो इला गएको हुँदा बिनिता र उनको दाइको अहिले बि चल्ली भएको छ ।अहिले पिताको अवस्थामा सुधार भइरहेको हामीले पाएका छौँ ।बिनितालाइ केही समय …
October 10, 2021 समाचार 0
काठमाडौं – कलाकार तथा समाजसेवी सिताराम कट्टेल –धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली)का लागि खुसिको खबर आएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय रंगशाला अलपत्र परेको भन्दै यो सरकारले बनाउने बताएकी हुन् । शनिबार चितवन उद्योग संघको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै पिता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल …
October 10, 2021 मनोरंजन 0
काठमाडौ । हाम्रो घर आँगनमा दसैंको रौनक आएको छ । काठमाडौ बसेकाहरु घर फर्केका छन् भने विदेश गएकाहरु पनि दसै मनाउन आइपुगेका छन् । गाउँघरमा ढकमक्क फूल फुलेका छन्, धानका बाला झुलेर उस्तै रमाइलो बातावरण बनेको छ । दर्सै जति बालापनमा रमाइलो हुन्छ ब्यवहारीक हुँदै गएपछि ठूलो उमेरमा जिम्मेवारी बढी …
मलाई पैसा होईन, किड्नी चाहिएको हो भन्दै धरधरि रोईन चम्सुरी!
हास्य टेलिश्रृखंला ‘मेरी बास्सै’ की चम्सुरी अर्थात कलाकार पल्पसा डंगोल अस्पताल भर्ना भएकी छन् । मि’र्गौला सम्बन्धी स’मस्याका कारण उनी केही दिन अगाडि महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पतालमा भर्ना भएको कलाकार दीपाश्री निरौलाले जानकारी दिइन् । उनमा केही अगाडि मिर्गौला सम्बन्धि समस्यामा देखिएको थियो । सो समस्याका कारण उनी एक महिना …
पक्राउ गर्न प्रह’री आएपछि रुखमा चढे आ’रोपी, प्र’हरी ३ दिनसम्म रुखमुनि कुरेर बस्यो
काठमाडौं। आफूलाई प’क्राउ गर्न प्रह’री आएको थाहा पाएपछि एकजना आरोपी रुखमा चढेर बसे । उनी लगभग तीन दिनसम्म रुखमै बसे र प्रह’री पनि ३ दिनसम्म रुखमुनि कुरेर बस्यो । ३ दिनपछि अन्ततः ती व्यक्ति भुइँमा ओलिएका छन् । भुइँमा ओर्लिएपछि उनलाई प्र’हरीले हिरासतमा राखेको छ । अमेरिकाको न्यूयोर्क शहरको क्विन्समा …
Page 401 of 408« First...370380390«399400401402403 » ...Last »